Dr. Mararaa Guddinaa Kamiisa Fullee Keenyaa Mana Murtii Duratti Dhiyaatu
Muddee 22, 2016
Roobii Kaleessaa Muddee 21 bara 2016 Dr Mararaa Guddinaa wajjin mana hidhaa maakalaawii keessatti wal arguu isaanii kan ibsan abukaatoo ka ta’an Obbo Wandimmuu Ibsaa harki isaa akka torban darbee walitti hidhamaa hin turre jedhan.
Dr Mararaan yeroo sadii polisootaan kan qorataman ta’us galmeen seeraan qophaa’ee yaada isaanii kan hin laanne ta’uu Obbo Wandimmuun ibsanii jiru.” Dr Mararaan yeroo Braasals keessa tureetti garee mootummaan Itiyoophiyaa shoroorkeessaa dha jedhee ramade waliin wal argee ergama fudhatee dhufe “ jechuun gaafatamuun beekamee jira.
Gama kaaniin Dr Mararaan erga hidhamanii booda reebamaniiru oduun jedhu soba jedhan. Dr Mararaan Kamisa fullee keenyaa jechuun Muddee 29 bara 2016 mana murtii duratti kan dhiyaachuuf jiran ta’unu beekamee jira.
Hidhamanii Hiikaman Moo Leenjifamanii Eebbifaman?
Magaalaa Bulee Horaa Keessatti Namni Tokko Ajjeefamuu Beekamee Jira
Dippiloomaatii Ameerikaa Gameessa: Jijjiirama Fiduuf Waadaa Seename Hojii Irra Oolchuuf Itti-gaafatamni Ka Mootummaa Itiyoophiyaa Qofa